people Nepal » मालदार विषयमा छिनाझपटी : विवादमा किन पर्छ निर्णय ? मालदार विषयमा छिनाझपटी : विवादमा किन पर्छ निर्णय ? – people Nepal
मालदार विषयमा छिनाझपटी : विवादमा किन पर्छ निर्णय ?
माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्मा संसद्को लेखा समितिको सभापति भएका बेला चमेलिया आयोजनामा २८ करोड अनियमितता भएको भन्दै भुक्तानी रोक्न सरकारलाई निर्देशन दिइयो । उनकै सभापतित्वमा बसेको समितिको अर्को बैठकले डलरमा पीपीए नगर्न सरकारलाई निर्देशन दियो । आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ ।
तर, शर्मा ऊर्जामन्त्री भएपछि भने उनले ८ सय ६० मेगावाटका दुई आयोजना (तिला १ र तिला २) मा डलरमा समझदारी गरे । चमेलियालाई भुक्तानी दिएर काम अघि बढाइयो ।
यी उदाहरण ‘मिनी संसद्’ मानिने संसदीय समितिहरूले सस्तो लोकप्रियता र बिनाअध्ययन गरेका केही विवादास्पद निर्णय हुन् । एकातिर संसदीय समितिहरू कार्यक्षेत्र मिचियो भन्दै एकअर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ उनीहरूले गर्ने निर्णय विवादको घेरामा छन् । ‘मालदार’ विषयमा अधिकांश समितिले हात हाल्दा विषय छरपष्ट भई ‘हलुंगो’ हुने र दोषीले उन्मुक्ति पाउने गरेको संसद्का जानकारहरू बताउँछन् ।
हस्तक्षेप गर्ने परिपाटी : पाण्डे
‘केही समिति सक्रिय नै नहुने र केही बढी सक्रिय भइदिँदा समस्या देखापर्ने गरेको छ’, ०४८ सालदेखि लगातार सांसद रहेका एमाले नेता राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे भन्छन्, ‘निर्णय नहुँदै हस्तक्षेप गर्ने परिपाटी पनि बढ्दै गएको छ । कतिपय विषय आर्थिक लाभ वा खराब नियतले पनि समितिमा उठाइने गरिएको छ ।’
रहरले निर्णय प्रभावित : थापा
‘विषयवस्तुको गाम्भीर्य नबुझी लोकप्रियता कमाउन र कार्यकारी हुने रहरले अधिकांश समितिका निर्णय प्रभावित भइरहेका छन्’, जलस्रोत समितिका पूर्वसभापति एवं कांग्रेस सांसद गगन थापा भन्छन्, ‘समितिको काम भनेको कार्यकारिणीलाई सहजीकरण गर्ने हो तर काम रोक्न, रद्द गर्न आदेश दिने होइन ।’